Ciidamada Puntland Oo Weeraray Nabadoon Caan Ah – Banaadir weyne
Ciidamada Puntland Oo Weeraray Nabadoon Caan Ah
Boosaaso – Ciidamada katirsan dowlad Goboleedka Puntland ayaa waxaa la sheegay in saakay ay hoygiisa ku weerareen Nabadoon C/casiis Cabdi Baydhabood oo kamid ah waxgaradka ugu caansan deegaannada Puntland gaar ahaan gobolka Bari.
Ciidamada ayaa la sheegay inay tageen hoyga uu ka degan yahay Magaalada Boosaaso, waxana qaar kamid ah dadka deriska la ah ay sheegeen inay saakay dareemeen qalqal amni.
Qaar kamid ah Waxgaradka Gobolka Bari ayaa waxaa ay sheegeen in Nabadoonka ay Ciidamada Puntland kusoo qaadeen weerar qaawan oo salka ku haayo arrimo la xiriira dekadda Boosaaso oo ay gacanta ku heyso Shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta.
Nabadoon C/casiis Cabdi Baydhabood ayaa dhawaan waxaa uu si kulul uga hadlay qaabka ay Shirkadda DP World u maamushio Dekadda Boosaaso oo uu ku dhaliilay inay mas’uul ka yihiin Madaxda Puntland.
Saacadaha soo socda ayaa la filayaa in qaar kamid ah waxgaradka Gobolka Bari inay qabtaan shir saxaafadeed ay uga hadlayaan weerarka lagu qaaday Nabadoon C/casiis Cabdi Baydhabood.
Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari ayaa waxaa laga dareemay weerarka saakay Ciidamo katirsan Puntland ay ku qaadeen Hoyga uu Magaaladaas ka degan yahay Nabadoon C/casiis Cabdi Baydhabood oo kamid ah Odayaasha Dhaqanka Gobolka Bari. – Shaaciye News